Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd. yakavambwa muna 2013, ichinyanya kuita tsvagiridzo nekusimudzira, kugadzira, kugadzirisa, kushandisa, uye kugadzirwa kwemagetsi ezvemakina zvikamu. Kurongeka kwechigadzirwa kunovimbiswa, kutaridzika kwakanaka, kugadzirwa kwakazara uye mhando yekutonga system, uye yakapfuura ISO9001 uye ISO13485 yekurapwa chitupa.
8+ makore Nhoroondo yekambani
vanopfuura 100 Nhamba yevatengi
Professional vasiri- standard customized vagadziri
Isu tinopa yakaringana zvikamu zvekugadzirisa uye kugadzira mhinduro, uye tora kuchengetedza kwezvakatipoteredza semutoro wedu, mhando sepakati, uye tinokupa iwe zvigadzirwa zvaunoda!
Michina yedu yepamberi nemidziyo uye kugona kwekugadzira kunoita kuti tipe mhinduro dzinochinjika kuzadzisa zvinodiwa nevatengi pamatanho ese. Isu hatisi chete kugadzira yakakwirira-chaiyo uye yakaoma zvigadzirwa zvekurapa, asi zvakare tinopa aerospace, optics, drones, marobhoti, Precision inotakura zvikamu zvekugadzirisa mumotokari uye mamwe maindasitiri, uye tinogadzira zvakatemwa uye kushivirira kwakasimba zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Zvimwe Zvigadzirwa Zvemhando
Vadiwa vaenzi, kuwedzera kune zvigadzirwa zviri pamusoro, tinokupa iwe zvinotevera zvigadzirwa:
Ndinovimba unogona kutibata nenzira dzinotevera, ndatenda!